Muuse Biixi oo si kulul uga hadlay xayiradii Xasan iyo Shariif eedeymo badana u jeediyay… | Somsoon
Home WARAR Muuse Biixi oo si kulul uga hadlay xayiradii Xasan iyo Shariif eedeymo...
Muuse Biixi oo si kulul uga hadlay xayiradii Xasan iyo Shariif eedeymo badana u jeediyay…
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta markii u horeysay ka hadlay talaabooyinkii ka dhanka ahaa Madaxweynayaashii hore ee dalka, ee muddooyinkii u dambeeyay ay qaadeysay dowladda federaalka Soomaaliya.
Muuse Biixi ayaa sheegay in Farmaajo oo aan xukumin Villa Somalia uu rabo in uu xayiraado saaro socdaalada Madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya, Shariif Sheikh iyo Xasan Sheikh.
Biixi ayaa talaabooyinkaasi ay dowladda federaalku ugu xanibeyso garoonka diyaaradaha madaxweynayaashii hore ee dalka ku micneeyay kuwa aan xataa dhaqan siyaasadeed iyo Soomaaliyeedba aan shaqo ku laheyn.
Madaxweyne Muuse Biixi ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay weeraro dowladda fedralku ay ku qaaday Somaliland sida uu sheegay, kuwaas oo soo bilaawday markii uu xilka la wareegtay madaxweyne Farmaajo, weeraradaas ayuu ku sheegay Muuse Biixi inay dowladda dhexe ku cuuryaamineyso horumarka iyo kobaca dhaqaale ee Somaliland.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntiina waxa uu Farmaajo ku eedeyay in uu dhaqaalaha caalamku uu ku taageero dowladda Soomaaliya uu u adeegsado burburinta maamulada ka jira dalka, gaar ahaan kuwa ka soo horjeeda.
“Maanta Kismaayo dagaalbaa ka socda, Xamar dagaalbaa ka socda, Dhuusamareeb dagaalbaa ka socda, oo dowladda Farmaajo labadii Madaxweyne ee ka horreeyay maalin walba way xirtaa waad arkeysaa halka la maraayo iyo Qaraxa ka taagan Muqdisho iyo meelo kale” ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi.
Wuxuuna intaas kusii daray “Puntland maanta waad arkeysaan dhibkaas oo dhan waxaa wadda dowladda Farmaajo laakiin wali way ku jirtaa tababar oo waxay kusoo wajahan tahay Somaliland”.
Article horeXodigga Virgil van Dijk oo ku guuleystay abaal-marinta sanadkan
Article socoda Diiwaan galinta wajiga labaad ee ciidan ay dowladdu ka qoraneyso Beled-Xaawo oo soo idlaatay